Asa 10: 1-48
Asa 9 Asa 10 Asa 11
Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria, atao hoe Kornelio, kapiteny tamin'ny antokon'ny miaramila atao hoe Italiana;
ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mbamin'ny ankohonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva.
Ary izy nahita miharihary tamin'ny fahitana rehefa tokony ho tamin'ny ora fahasivy antoandro, fa, indro, nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao aminy ka nanao taminy hoe: Ry Kornelio.
Ary rehefa lasa ny anjely izay niteny tamin'i Kornelio, dia niantso roa lahy tamin'ny mpanompony izy sy miaramila mpivavaka anankiray isan'izay nanaraka azy isan-andro.
Ary nony ampitso, raha mbola nandeha teny an-dàlana izy ireo ka mby teo akaikin'ny tanàna, dia niakatra teo ambonin'ny tampon-trano Petera mba hivavaka, rehefa tokony ho tamin'ny ora fahenina.
ary tao anatiny nisy ny biby rehetra izay manan-tongotra efatra sy ny zava-mandady sy mikisaka ety an-tany ary ny voro-manidina.
fa mitsangàna hianao, dia midìna, ary mandehana miaraka aminy, ka aza misalasala, fa Izaho no naniraka azy.
Ary Petera nidina tany amin'ireo olona ireo ka nanao hoe: Inty aho izay tadiavinareo; inona no anton'ny ahatongavanareo aty?
Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe: Mitsangàna fa izaho dia olana ihany.
Ary amin'izany dia tsy nandà tsy hankaty aho, raha nampanalaina; dia manontany aho: Ahoana moa no nampanalanareo ahy?
Dia hoy Kornelio: Loak'andro afak'omaly, mandra-paha-toy izao ny andro, raha nivavaka teto an-tranoko aho mandritra ny ora fahasivy, dia indro nisy lehilahy niakanjo akanjo mamirapiratra nitsangana teto anatrehako
Koa maniraha hankany Jopa, ka ampanalao Simona, izay atao hoe Petera; mitoetra ao an-tranon'i Simona mpandon-koditra eo amoron-dranomasina izy.
Koa niaraka tamin'izay dia naniraka tany aminao aho; ary nanao soa hianao no avy. Koa ankehitriny izahay rehetra dia efa eto anatrehan'Andriamanitra hihaino izay rehetra nandidian'ny Tompo anao.
Hianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin'ny Zanak'Isirely, mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy (Izy no Tompon'izao rehetra izao),
Izay nohosoran' Andriamanitra tamin'ny Fanahy masina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon'ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba Azy.
tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay notendren'Andriamantira rahateo, dia taminay izay niara-nihinana sy nisotro taminy, rehefa nitsangana tamin'ny maty Izy.
Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina.
Dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy. Ary nangatahin'ireo mba hitoetra ao aminy andro visivitsy izy.